Maitiro ekudzivirira pdf muGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekutarisa pdf muGnu / Linux
Mafaira ePDP ave fomati inozivikanwa kwazvo uye anoshandiswa nevashandisi vese veGnu / Linux, kunyangwe isiriyo yemahara fomati senge djvu kana epub. Asi mashandisiro ayo ave kufarirwa zvekuti mafaira akawanda anowanikwa aine masiginecha edhijitari kana mapassword zvinoita kuti zvikone kuverenga mafaira aya kana kudzora zvakananga mamwe emabasa atinogona kuita nemafaira epdf, sekudhinda kana kutumira.
Hedzino dzinoverengeka nzira dzekupfuura idzi mhando dzekurambidzwa kana maitiro ekuzvidzivirira iyo pdf yemaphasiwedi uye zvisingakwanisike pasina kuva vanobiridzira kana kubhadhara masevhisi evatambi.
3 Shandisa iyo Gnu / Linux chaiyo printer
6 Uye ndosarudza ipi?
Zvishandiso zveWebhu zvave kufarirwa kwazvo uye zviri nyore kuwana kune wese munhu, nekuda kwekumhanya kwakanyanya uko fiber optics uye iyo adsl kubatana inobvumidza. Sezvo nemamwe mabasa, isu tinogona kuisa pdf faira ine password uye kusadzivirira iyo pdf kuburikidza newebhu webhu iyo inozo dzorera iyo pdf faira kwatiri zvachose yemahara uye neakakwana mashandiro.
Dambudziko nenzira iyi riri mumatare epamutemo uye asiri emakomputa Kana isu tichizodzivirira iyo pdf ine zvishoma madiro epamutemo, kusiira iri basa kune webhu webhu zvinoita senge sarudzo yakanakisa, kunyanya kana tichifunga nezvekuti pane iyo RGPD uye nechikumbiro chemushandisi data. Kunyangwe zvakadaro, kana mafaera edu ari edu uye isu takanganwa password, zvinoshandiswa senge online2pdf zvinoita senge yakanaka sarudzo.
Online2pdf raizove rinonyanya kufarirwa sevhisi kune ese uye akanakisa iwo ese nekuti haisi chete inodzivirira iyo pdf faira asi zvakare inotibvumidza isu kushandura iyo faira kune chero imwe fomati. Inobatsira 2-1 kune vazhinji vashandisi vevashandi. Haisi iyo yega, kune vamwe vanozoonekwa kana iwe ukanyora "unprotect pdf" mune chero webhu bhurawuza, asi online2pdf nderimwe remasevhisi akanakisa.
Zvinonzwisisika, iyo Google webhu yekuchengetedza sevhisi inotibvumidza isu kudzivirira pdf's, Google Drive inotibvumidza isu kuti tiite izvi asi kwete sechinhu chitsva kana basa rebasa reGoogle asi sechinhu chakamuka semhedzisiro yemamwe mabasa. Kuti uzo chengetedza pdf muGoogle Drive, isu tinofanirwa kuenda ku "Nyowani" uye kurodha iyo yakachengetedzwa pdf faira kuGoogle gore dhiraidhi. Kana tangoisa faira, tinobva tadzvanya pafaira uye sarudza sarudzo "yakavhurika ne ..." uye mune runyorwa runoonekwa tinosarudza sarudzo yeGoogle Zvinyorwa.
Nokusarudza iyi sarudzo, Google ichashandura iyo pdf gwaro kuita Google Docs gwaro uye isu tinokwanisa kurigadzirisa, kuripurinda kana kushandura zvimwe zvinhu tisingatombo kunetsekana kuti inodzivirirwa here kana kuti kwete nekuti isu tinoshandisa kopi yegwaro riya uyezve tinokwanisa kuritumira kunze pdf fomati kuwana faira rakafanana asi risina dziviriro. Sezvauri kuona, iri nyore, inokurumidza uye yemahara sarudzo, uko pasina munhu kunze kwedu anoziva zvatinoita kana kuti mashandiro atakaita.
Shandisa iyo Gnu / Linux chaiyo printer
Iyi nzira ndiyo yakanakisa nzira irimo muGnu / linux kutarisa pdf faira. Zvirinani ndeimwe yenzira dzekare kunze uko. Nzira dzazvino dzekudzivirira hadzi shande pamwe nekuparadzirwa kweGnu / Linux sezvo Linux pdf vanoona vachibvumira kudhindwa kwemafaira aya
Mune ino kesi, kusachengetedza pdf isu tinofanirwa chete purinda iyo faira uye pachinzvimbo chekuzviita muprinta wepanyama, isu tinofanirwa kuzviita kune fairandiko kuti, shandisa iyo chaiyo printer yekuparadzira kwedu Gnu / Linux. Iyi faira nyowani ichave pdf uye tinogona kuiisa chero kwatinoda. Tinodzvanya bhatani rekudhinda uye muoni achagadzira gwaro rakafanana asi pasina dziviriro. Inokurumidza, yakapusa uye yakazara zvakaringana kune iyo Gnu / Linux nyika, isu hatigone kuita zvakafanana nemamwe masisitimu anoshanda.
Tevere isu tichaenda kutaura nezve maviri akasarudzika Gnu / Linux kunyorera izvo Izvo zvichatibvumidza isu kutsemuka uye kudzoreredza iwo mapassword eiyo pdf mafaera kuti tidzivirire pdf nenzira yakapusa. Yekutanga inonzi qpdf. Qpdf chishandiso chinoshandiswa kuburikidza nemutsetse wekuraira kana chinongedzo uye chinoita chiitiko chakafanana nekudhinda faira rakachengetedzwa, ndiko kuti, inogadzira pdf faira isina kudzivirirwa asi iyo faira rakachengetedzwa richiripo.
Kuti ushandise chishandiso ichi, isu tinofanirwa kuiisa kutanga. Saka isu tinovhura terminal uye tinyore:
Isu tinofanirwa kuyeuka kuti iyo apt-tora kuraira inofanirwa kuchinjwa zvinoenderana neiyo gnu / linux kugovera yatinoshandisa.
Kamwe yaiswa, ku chengetedza pdf isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
qpdf --decrypt pdf-protegido.pdf pdf-desprotegido.pdf
Zita rekuti "pdf-protected" izita refaira rinozoshanduka zvichienderana nemafaira atinoda kudzivirira kana kuchengetedza.
Kazhinji dzese nzira dziri pamusoro dzinoita kopi yeiyo pdf faira uye dziviriro haina kuiswa kune ino kopi. Izvi zvinoitika nekuti zvakaoma kana zvisingaite kubvisa password yekudzivirira. Asi izvi hazvireve kuti hatigone kutsvaga pasiwedhi uye nekugona kurishandisa nenzira yakapusa. Iri basa ndiro rinoita iyo pdfcrack chirongwa, chirongwa chinodzoreredza password yeimwe pdf faira kuti uishandise uye nekudaro shandisa ese mashandiro ayo.
Kuti tishandise, tinofanirwa kutanga tayiisa, vhura terminal uye nyora zvinotevera:
Sezvakaita neiyo qpdf chishandiso, isu tinofanirwa kuyeuka kuti iyo apt-tora kuraira inofanirwa kuchinjwa zvinoenderana neiyo gnu / linux kugovera yatinoshandisa.
Zvino, kuti tiishandise, isu tinongofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
pdfcrack -f filename.pdf -l savedstate.sav
Izvi zvichatisika chinyorwa faira chichava nephasiwedi yefaira ratakadzivirira. Pasiwedhi yatinogona kushandisa gare gare.
Uye ndosarudza ipi?
Panguva ino, zvirokwazvo iwe unonetseka kuti ndeipi sarudzo yandinoshandisa kana yandinokurudzira? Ini pachangu, ini handisi kushandisa zvakanyanya kudzivirirwa pdf mafaera, nekuti kana ini ndisingade kuti ruzivo rwupararire, zvirinani kusagovana. Asi kana ndichifanira shandisa chishandiso kusadzivirira pdf, iyo yandinowanzo shandisa ndeye Gnu / Linux faira kudhinda uye kana zvikasashanda (mamwe emazuva ano ma pdf abuda nzira iyi) ndino zendamira kumaturu akafanana ne qpdf.
Chero zvazvingaitika tinofanira kurangarira izvozvo Kushandiswa kwenzira idzi ibasa rako uye tinokurudzira kuti zvishandisirwe zviri pamutemo kana neako ega mafaera haana kumboita zvisiri pamutemo zviito. Zvichida uchiremekedza izvi, nzira yakanakisa iri online2pdf. Asi,Ndeipi nzira yaunofarira kudzivirira pdf?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekutarisa pdf muGnu / Linux
Kukunda PaGungwa Pacific - Mutambo chaiwo wevhidhiyo nezvehondo dzechikepe ...